अख्तियारले रोकेको लुम्बिनी प्रदेशको कर्मचारी छनौट कहाँ पुग्यो ? - कृषि डेली
Home फिचर अख्तियारले रोकेको लुम्बिनी प्रदेशको कर्मचारी छनौट कहाँ पुग्यो ?
बुटवल । प्रदेश मातहात रहने गरी लुम्बिनी प्रदेशले खुलाएको कृषि प्राविधिकको छनौट प्रकृया रोकिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयागले छनौट प्रकृयामा अनियमितता भएको भन्दै छनौट प्रकृया रोकेपछि अन्तर्वार्ताको तयारी गरेका उम्मेदवार अन्योलमा परेका छन् । अख्तियारका कारण रोकिएको छनौट प्रकृया कहिले सुरु हुन्छ भन्ने एकिन छैन् ।
यस बारेमा बुझ्नका लागि हामीले लुम्बिनी प्रदेश भूमी, व्यवस्था, कृषि तथा शहकारी मन्त्रालयका सचिव रेवती रमण पौडेललाई सम्पर्क गरेका थियौं । उहाँका अनुसार प्रदेश मातहातका कर्मचारी छनौट रद्द भएको छ । करार सम्झौतामा १ वर्षका लागि छनौट गर्नका विज्ञापन गरिएको भएपनि आर्थिक वर्ष सकिन लागेकाले परिक्षा रद्द गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
स्थानीय तह मातहात रहने कर्मचारी छनौट भने स्वयम स्थानीय तहले छनौट गर्न पाउने गरी ब्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । परीक्षामा सामेल हुनका लागि परीक्षा शुल्क बापत बुझाएको रकम के हुन्छ त, भन्ने प्रश्नमा उहाँले सबै उम्मेदवारको रकम सूचना निकालेर खातामा जम्मा गरिने जानकारी दिनुभयो ।
Previous articleगण्डकी प्रदेशको कृषि प्राविधिक कर्मचारी छनौटमा अनियमितताको आरोप
Next articleनेपालमा तरकारी खेतीको लागि संरक्षित संरचनाको प्रयोगबाट फाइदा लिन ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु